Obodo isi obodo Naijiria nwetara ijeri naira otu na ụma isii maka ọkụ eletrik. – Igbo Services
Akụkọ na ewuewu
Obodo isi obodo Naijiria nwetara ijeri naira otu na ụma isii maka ọkụ eletrik.
Timothy Choji, Na Abuja kọrọ ya n' Bekee.
Akụkọ na ewuewuNaijiria
By Chigo	 Last updated Jun 23, 2022
Ụlọ ọrụ Federal Executive Council kwadoro ijeri naira otu na ụma isii maka nyocha elu nke ọnụ ahịa maka owuwu nke ụlọ ịgba ọgwụ mgbochi iji kwalite ọkụ eletrik na mpaghara Gwarinpa nke Abuja, isi obodo Nigeria.
Mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi na omenaala, Lai Mohammed kwupụtara nke a nye ndị nta akụkọ n’ụlọomeiwu steeti na ngwụcha ọgbakọ ndị minista n’izu a nke onyeisiala Muhammadu Buhari na-achị.
O kwuru na e bu ụzọ kwado nkwekọrịta ahụ n’afọ 2015 mana n’ihi ọgbaghara nwe, onye ọrụ ahụ enweghị ike ịbanye na saịtị ahụ, n’ihi ya, ọnụ ahịa riri ọnụ abanyela, nke butere ịkpọ oku ka e nyochaa ọnụ ahịa nkwekọrịta ahụ ruru ihe karịrị otu ijeri naira. .
Mohammed, onye na-ekwuchitere ogbo ya Federal Capital Territory (FCT) kwuru, sị: “Mịnịsta nke FCT wetara ndetu ya na-achọ nkwado maka nlebanya elu nke nyocha elu nke nkwekọrịta maka iwu ụlọ ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi MVA abụọ 15. na Life camp Gwarinpa, Abuja
isi obodonwetaraọkụ eletrik.
Chigo 283 posts 0 comments
NCWD kwuru na nke a ga-ejikọta mkpa ụmụ nwanyị bi n’ime ime obodo na amụma gọọmentị.
Kizz Daniel chọrọ ime ‘Buga’ na iko mba ụwa.
Isiokwu dị mkpa
Onyeisiala Buhari ekwela nkwa na ọ gaghị agbatị oge ọchịchị ya.
NCWD kwuru na nke a ga-ejikọta mkpa ụmụ nwanyị bi n’ime ime obodo na amụma…
Ọnụ ego mgbapụta mmanụ ụgbọala ka dị otu nari naira na iri isii na ise -Gọọmenti…
Ndị isi ọchịchị kwadoro ijeri naira #48.4 maka ịrụ okporo ụzọ.
Otu Nze na Ozo.
Isiokwu dị mkpa245